Galaxy S10 ရဲ့ Selfie ကင်မရာ အပေါက်နေရာကို မီးဝိုင်းလေးလင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? | MyTech Myanmar
Galaxy S10 ရဲ့ Selfie ကင်မရာ အပေါက်နေရာကို မီးဝိုင်းလေးလင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
Galaxy S10 စီးရီးရဲ့ Selfie ကင်မရာ အပေါက်နေရာတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် Wallpapers က စလို့ Battery Indicator အထိ အမျိူးမျိူးသော တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း Galaxy S10 ရဲ့ Selfie ကင်မရာ အပေါက်နေရာ ပတ်ချာလည်မှာ ရောင်စုံမီးလေးတွေ ထွန်းလင်းပေးနိုင်မယ့် Application လေးတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။
အဆိုပါ Application လေးကို Android Developer ဖြစ်တဲ့ Chainfire ကနေ ဖန်တီးရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီး Holey Light လို့ ကင်ပွန်းတပ်ပေးထားပါတယ်။ Holey Light App ဟာ ကင်မရာ အပေါက် ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ နေရာလေးမှာ Notification ဝင်လာတိုင်း မီးဝိုင်းလေး ပတ်ပြေးနေတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Camera App ကို ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်း အဆိုပါ ပုံစံလေးကို ပြသပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ( Holey Light ဟာ မိမိနှစ်သက်ရာ အရောင်လေးတွေကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်သလား ဒါမှမဟုတ် အရောင်မျိူးစုံကို တခါတည်းပြအောင် လုပ်နိုင်သလားဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး)
Holey Light App နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိချပ်စရာရှိတာက အဆိုပါ App ဟာ Lockscreen ပေါ်မှာ အလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ Screen ပိတ်ထားတဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းအားသွင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာ မီးလင်းအောင် လုပ်ဖို့အတွက် လေ့လာစမ်းသပ်နေဆဲ Feature ကို Chainfire က ထည့်သွင်းပေးထား ပေမယ့်လည်း Android Authority ကတော့ ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ အားနည်းချက်တွေကို လစ်လျူရှု့နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ Chainfire က ဖန်တီးရေးဆွဲထားတဲ့ Holey Light App ကို ဒီမှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ App ကို Galaxy S10, S10 Plus နဲ့ S10e တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Galaxy S10 ရဲ့ Selfie ကငျမရာ အပေါကျနရောကို မီးဝိုငျးလေးလငျးအောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ ?
Galaxy S10 စီးရီးရဲ့ Selfie ကငျမရာ အပေါကျနရောတှကေို ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ အသုံးခနြိုငျဖို့အတှကျ Wallpapers က စလို့ Battery Indicator အထိ အမြိူးမြိူးသော တီထှငျဆနျးသဈမှုတှကေို ပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး Galaxy S10 ရဲ့ Selfie ကငျမရာ အပေါကျနရော ပတျခြာလညျမှာ ရောငျစုံမီးလေးတှေ ထှနျးလငျးပေးနိုငျမယျ့ Application လေးတဈခု ထှကျပျေါလာပွနျပါတယျ။
အဆိုပါ Application လေးကို Android Developer ဖွဈတဲ့ Chainfire ကနေ ဖနျတီးရေးဆှဲထားတာဖွဈပွီး Holey Light လို့ ကငျပှနျးတပျပေးထားပါတယျ။ Holey Light App ဟာ ကငျမရာ အပေါကျ ဘေးပတျပတျလညျမှာရှိတဲ့ နရောလေးမှာ Notification ဝငျလာတိုငျး မီးဝိုငျးလေး ပတျပွေးနတေဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျကို ပွသပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Camera App ကို ဖှငျ့တဲ့အခါမှာလညျး အဆိုပါ ပုံစံလေးကို ပွသပေးတယျလို့ သိရပါတယျ။ ( Holey Light ဟာ မိမိနှဈသကျရာ အရောငျလေးတှကေို ရှေးခယျြအသုံးပွုနိုငျသလား ဒါမှမဟုတျ အရောငျမြိူးစုံကို တခါတညျးပွအောငျ လုပျနိုငျသလားဆိုတာကိုတော့ အတိအကြ မသိရသေးပါဘူး)
Holey Light App နဲ့ ပတျသကျပွီး သတိခပျြစရာရှိတာက အဆိုပါ App ဟာ Lockscreen ပျေါမှာ အလုပျမလုပျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ Screen ပိတျထားတဲ့အခြိနျ ဒါမှမဟုတျ ဖုနျးအားသှငျးနတေဲ့အခြိနျတှမှော မီးလငျးအောငျ လုပျဖို့အတှကျ လလေ့ာစမျးသပျနဆေဲ Feature ကို Chainfire က ထညျ့သှငျးပေးထား ပမေယျ့လညျး Android Authority ကတော့ ကောငျးစှာ အလုပျမလုပျနိုငျသေးဘူးလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။
အထကျဖျောပွပါ အားနညျးခကျြတှကေို လဈလြူရှု့နိုငျတယျဆိုရငျတော့ Chainfire က ဖနျတီးရေးဆှဲထားတဲ့ Holey Light App ကို ဒီမှာ Download လုပျနိုငျပါတယျ။ အဆိုပါ App ကို Galaxy S10, S10 Plus နဲ့ S10e တှမှော အသုံးပွုနိုငျတယျလို့ သိရပါတယျ။
MyTech Myanmar2019-04-04T13:04:24+06:30April 4th, 2019|HowTo, Mobile Phones, News, Samsung, Tips & Stories|